Wasiirka Amniga Puntlland oo shirjaraa’id ku qabtay magaalada Boosaaso(Dhagayso)
June 4, 2012 - Written by
Boosaaso:- Wasiirka Amniga ee Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan ayaa waxaa ka warbixiyey socdaal uu ku tegay degmada Xaafuun ee Gobolka Karkaar waxaan uu sheegay in dadka degaanka ay wada hadleen codsiyo badan oo wax qabad ahna ay ka codsadeen Dowllada Puntlland. Wasiirka Amniga ee Dowladda Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan ayaa sheegay in madmadow soo kala dhexgalay dadka degaanka Xaafuun iyo ciidanka Badda xal laga gaaray ayna kulamo gaar gaar ah la qaateen odayaasha iyo waxgaradka ayana isku afgarteen in dadka degaanka ay dowlladu waxqabad dhab ah u qabato.
Wasiirka Amniga dowllada Puntlland Col. Khaliif Ciise Mudan ayaa xusay in Ciidanka Badda oo howlgal ka sameeyey Degmada Xaafuun ay ku soo qabteen ilaa 6 dhalinyaro dhawaana ay Maxkamada soo taagi doonaan. Wasiirka ayaa waxaa kale oo uu sheegay in amaanka degaanada Puntlland uu wanaagsan yahay marka laga reebo weerar ay ciidanka S/lland ku soo qaadeen degmada Laasqoray isagoo ku eedeeyey dagaalka dhacay in ay masuuliyadooda ay lahaayeen S/lland wuxuuna ugu baaqay in ciidankooda ay dib ula noqdaan.
Hoos ka Dhageyso Shirkii Jaraa’id ee Wasiirka Amniga ee Dowladda Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan
Dhinaca kale Wasiirka amniga dowllada Puntlland Col Khaliif Ciise Mudan ayaa sheegay in ciidanka amniga magalaada Boosaaso oo sameeyey howl galo ay qabteen nin uu sheegay in uu ahaa masuulka ka danbeeyey qaraxyada inta badan ka dhacay Puntlland gaar ahaan Boosaaso iyo Gaalkacyo isagoo sheegay in ninkaan uu ka yimid Gobolka Sh/ dhexe uuna ahaa maskaxadii ka dan baysay qaraxyadii ka dhacay Boosaaso si dhaqso ahna ay u soo taagi doonaan Maxkamada.
Wasiirka amniga Puntlland Col.Khaliif Ciise Mudan ayaa waxaa kale oo uu xusay in ciidanka Booliska Gaalkacyo howl gal ay sameeyeen shalay Galbeedka Xaafada Garsoor ay ku qabteen mid ka mid ah labadii nin ee fuliyey qaraxii ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo ay ku dhinteen ilaa 7 qof oo iskugu jira ciidan iyo dad rayid ah ayna ku dhaawacmeen saraakiil ka tirsan ciidanka.
Wasiirka amniga Puntlland Col.Khaliif Ciise Mudan ayaa sheegay in ninka shalay la qabtay uu la dagaalamay ciidanka oo ay dhaawaceen ka dibna ay qabteen iyagoo hadda ku xiray Xabsiga weyn ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Madaxda Maamulka Puntlland ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay ku eedeeyeen qaraxyada iyo dilalka ka dhacay Boosaaso iyo Gaalkacyo in ay fuliyeen xubno ka tirsan ururka Al-shabaab oo sheegeen in ay ka yimaadeen kuna soo tababarteen Gobollda Koonfureed ee dalka Soomaaliya waloow inta badan qaraxyada dhacay aysan sheegan Masuuliyadooda Ururka Al-Shabaab.